Annaga nagu saabsan - Ningbo Yinzhou Tuoda Plastic Co., Ltd.
NINGBO YINZHOU TUODA balaastikada CO., LTD waxaa la aasaasay 2008, oo leh aag warshadeed oo ah 5,000 mitir oo laba jibbaaran, 20 mashiin wax ka beddelidda sifaynta buuxda, waa soo saaraha xirfadle iyo dhoofiye alaabooyin caag ah oo tayo sare leh, sida alaabta karinta, dubista, jikada Qalabka, maacuunta, alaabta miiska, agabka, iyo alaabta guriga ee maalinlaha ah iwm.
Qalabka la farsameeyay oo ay ku jiraan ABS, SAN, PMMA, PBT, PLA, TPR, silicon, naylon, PP, PS, POM, PC, PCTG, cawska qamadiga ah, birta aan fiicnayn, birta aan fiicnayn, saxan qabow, aluminium aluminium, aluminium saxan iyo wixi la mida. Farsamooyinka wax-soo-saarka ee ugu muhiimsan waa habka wax-soo-saarka caagga ah, tignoolajiyada wax-soo-saarka balaastigga ah, habka wax-soo-saarka biraha.
Alaabtayadu waa badbaadada xidhiidhka cuntada. Tuoda Firmly waxay raacdaa nidaamka ISO9001&ISO14001. Had iyo jeerna samee tababar xiriir la leh shaqaalaheena. Si loo hubiyo in habka wax soo saarka our si waafaqsan heerka tayada sare leh. Intaa waxaa dheer, waxaan khibrad u leenahay kooxaha naqshadeynta iyo injineernimada iyo tas-hiilaadka wax soo saarka ee horumarsan. Markaa waxaan hubin karnaa badeecadayada kama dambaysta ah si aan u buuxinno shuruudaha macaamiisha kala duwan.
Saddexdii biloodba mar, badeecadaha naqshadaynta cusub ayaa lagula talinayaa macaamiisheena si joogto ah waxaanan u haysanaa shatiyada qaar ka mid ah alaabada muhiimka ah. OEM & ODM sidoo kale waa la soo dhaweynayaa. Si diiran u soo dhawoow weydiinta aduunka oo dhan. Tuoda waxay ku siin doontaa qiimo tartan oo alaab tayo sare leh si aad faa'iidadaada uga dhigto intii suurtogal ah. Oo hel xalka ugu fiican mashaariicdaada alaabta guriga.
Bilawga, waxaan ku taageeri karnaa ganacsigooda MOQ hooseeya, dhoofinta dhoofinta, fudud oo la sameeyay, xirmo faylal bilaash ah oo ay ku jiraan sawirada alaabta iyo fiidiyowyada. Iyo, macaamiisha sumadda, waxaan ku siin karnaa alaab tayo sare leh, sahay deggan, koontarool tayo adag, iyo adeeg iibka kadib oo joogto ah.
Habka Maareynta Tayada
1.Kordhinta muuqaalka ah ee baakadaha alaabta ceeriin, calaamadaynta, tayada muuqaalka;
2.Gubashada, sawir-qaadista iyo sabaynta si loo tijaabiyo sifooyinka alaabta.
1. Kormeerka muuqaalka ee alaabta caaga ah;
2.Product kormeerka muuqaalka daahan buufin;
3.Kormeerida qaababka daabacan
Shir gudeed si looga wada hadlo suurtogalnimada dalabka, bixi naqshadda qabyada ah.
2.Mold design iyo furitaanka.
Siidaynta alaabta iyo cusboonaysiinta
1. Soo galooti cusub oo la sii daayo;
2.Suuq gaynta ;
3. Run warbixinnada;
4.U cusboonaysii talooyinka soo noqnoqda.